कोरोना संकटबाट कसले लाभ उठाउँछ ? :: NepalPlus
कोरोना संकटबाट कसले लाभ उठाउँछ ?
एकातिर फ्रान्समा चार लाख साना व्यवसायहरू कोरोना भाइर प्रभावका कारण बन्द गर्नुपर्यो । कोरोना भाइरसका कारण ८० लाख कामदार अंशिक रुपमा बेरोजगार भए । कति दिर्घकालिन रुपमा बेरोजगार बन्छन् निर्क्योल छैन । अमेरिकामा मात्रै ६६ लाखले रोजगारी गुमाए । सिएनबिसि न्युजका अनुसार विश्वभरि झण्डै दुई करोड ५० लाखले आफ्नो रोजगारी सदाकालागि गुमाउने छन् । अर्कोतर्फ केहि यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई यो कोरोना संकटले फाइदा पुर्याउँछ ।
फ्रान्सेलीहरुको खाद्द बजेटले आकाश छोएको छ । छनौटको अभाव, स्तरोन्नतीको अभाव, क्यान्टिनहरु बन्द रहनुले गर्दा दिनको तिन पटक खानाकालागि ओसार्दा ट्रलीहरु भराभर हुने गरेको थियो ।
फार्मेसीहरूबाट लुटिएको गुनासो गरिरहेका छन् मानिसहरु । औषधी कम्पनीहरूले आफ्ना औषधीहरु यहि बेला धेरैभन्दा धेरै बिकाउन उनीहरूको फार्मेसीवालाका हात मोल्दै छन् । विशेष रूपमा क्लोरोकिनको मामलामा । किनभने यस उत्पादको बिक्री तिन सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ अहिले ।
फार्मास्यूटिकल क्षेत्रको प्रख्यात अनुसन्धानमुलक बायो फर्मास्युटिकल कंपनी गिलियड साइन्सको शेयर बजारमा २० प्रतिशत बढेको छ । किनभने यसको औषधि रेमेडेभिरो कोरोनाभाइरसको सम्भावित उपचारको रूपमा क्लिनिकल परीक्षण भैरहेको छ ।
युरोमेडिस फ्रान्सको यस्तो नेत्रित्वकर्ता कम्पनी हो कि जसले मेडिकल पन्जा निर्माण गर्ने मुख्य हैशियत राख्छ । यो कोरोनाको प्रकोप बढेपछि उसको बिक्रि २४४ प्रतिशतका दरले बढेको छ । फ्रान्सको स्वच्छ सामाग्रि उत्पादन गर्ने (हाईजिन प्रोडक्ट) आरोपी कम्पनीले अप्रिल दुईमा २० प्रतिशतले ब्रिद्दि गर्यो ।
सरकारले कोरोना भाईरसको घटनामा सम्पूर्ण उपाय अबलम्बन गर्न खोजिरहेको छ । कोरोना भाईरसले अत्तालिएका फ्रान्सेलीहरुले बिरोध गर्न छोडेका छन् । देशको अब्यवस्थित अवस्था र ब्यवस्थापनका बिरुद्द बोल्न छाडेका छन् ।
राष्ट्रपती इमानुएल माख्रों र प्रधानमन्त्री एडुवार्ड फिलिपले देश अहिले युद्दभूमीमा परिणत भएको भन्दै जनताको सुरक्षाको लागि राष्ट्रका नायकका रूपमा उभ्याउन खोजे । चिनियाँ नेताहरूले अमेरिकी सेनामा भएको कोरोना आतंकको फाइदा उठाउँदै छिमेकी देशहरूबाट तेल जम्मा पारेर फाइदा लिइरहेका छन् ।
तानाशाही वा प्रजातान्त्रिक सबैलाई समान लडाई लड्नु परिरहेको छ अहिले । अहिले कुनै दमनकारी उपायहरू छलफल गरिएको छैन । लकडाउुन उल्लंघनकारिहरु पत्ता लगाउन ड्रोनहरु आकाशमा उडाईयो, तैपनि कोहि बिरोधमा उत्रिएन । सडकहरू रोक्न र जरिमानाको वर्षा गर्न छुट छ अहिले । आफ्ना सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न ईन्टरनेट र सामाजिक मेडियाहरुले केहि मुलुकका कडा प्रतिबन्धको सामाना गर्नुपरेको छ । केहि मुलुकमा त्यो स्थिति निम्तिने देखिन्छ ।
सिस्को सिस्टम्स ’वेबिक्स र जूम भिडियो संचार, दुई भिडियो कन्फरेन्सिंग प्रदायकहरू, यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो विजेताहरू हुन् । ओक्ता र केडस्केलर जस्ता साइबरसुरक्षा कम्पनीहरूले पनि फाइदा लिन सक्दछन् ।
अमेजन, वालमार्ट र कोस्टको शीर्ष रिटेल कंपनीहरुले प्रशस्त नाफा लिने छन् । किनकि ग्राहकहरूले अनलाइन किनमेल गर्ने अर्को कारण रहेको छ । ग्रोसरी पसलहरुपनि ब्यस्त रहे किनकि खाद्यान्न अलग्गै किन्नुपर्दा त्यहिँ जानुपर्छ । किनकि बाहिर गएर खाने चलन केहि समयकालागि अझै खुम्चिने छ ।
अझ अतिरिक्त, युवा र बुढापाका दुबै खाले उमेरका मान्छे बाहिर निस्किने क्रम घट्ने छ । तिनले घरमै आनन्द गर्ने तरिका बढि अपनाउने छन् । घरमै खेल्ने खेल र प्रबिधीको माग बढ्ने छ । नेट्फ्लिक्सले अझै भिडियो स्ट्रिमिंगमा शासन बढाउने छ । डोमिनस् पिजाको बिक्रि बढ्ने छ । डेलिभेरोको बजार फैलिने छ । घरमै सिमित रहने आर्थिक प्रब्रित्ति हाबी हुने छ । जि वा वायरलेस टेक्नोलोजीको पाँचौं जेनरेशनलाई ग्रहण गर्ने क्रममा घरबाट चाँडो जडानको वेग अगादि बढ्ने छ ।
क्वालकॉम र भेरिजन संचार यस क्षेत्रका दुई प्रमुख खेलाडीहरू हुन् । पछिल्ला वर्षहरुमा ब्यापार प्रविधी उन्मुख, प्रविधीतिर बढि भर पर्दो भैरहेको छ आफ्ना प्रयोगकर्तासित जोडिनकालागि । डोकुसाईनले स्क्यान गरेर आफ्ना कागजात ईमेलबाट तत्कालै पठाउन सकिने, सहि समेत गर्न सकिने प्रविधी बनाएको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमणसँगै अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले बिरामीहरुलाइ चिकित्सकले टेली मेडिसिनको माध्यमबाट जोड्न, सपर्क गर्न सकिने सेवालाई स्विक्रिति, बैधता दिएको छ । यसबाट अब टेलीमाध्यमको विकास गर्नेहरु मालामाल हुनसक्ने संकेत बुझ्न सकिन्छ ।
अब सबभन्दा महत्वपूर्ण दिगो-स्थायी प्रभाव प्रविधीको क्षेत्रमा महसुस हुने छ किनकि कोभिड १९ को विश्वपछि विश्वमा डिजिटलीकरणले प्रमुख भूमिका खेल्ने छ । हाइपर स्केलरहरू, डाटा सेन्टर प्रदायकहरू, सञ्चारका पूर्वाधार, सफ्टवेयर प्रदायकहरू, साइबर सुरक्षा, डिजिटल खेल र अन्य स्ट्रिमिंग मनोरन्जन कम्पनीहरू, अनलाइन शिक्षा र घर भित्रका खेलिने खेल र ब्यायमका साधनहरु मुख्य लाभार्थीहरू हुनेछन् ।
कामहरु कसरि ब्यवस्थापन गरिएको छ भन्नेमा वर्तमान जनस्वास्थ्य संकटले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने छ । अहिलेको बन्दाबन्दि अवस्थामा ब्यापारिक घरानाहरु सय प्रतिशत कामनै घरबाट गर्न बाध्य भएका छन् । अझपनि विश्वका धेरै मुलुकमा घरबाट काम गर्ने पद्दति बसालिएको छैन । त अब बसालिने छ ।